... 10:52:00 AM
အမြဲတမ်း အဲလိုကြီးလည်း မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးလေ ..
ခပ်ပိန်ပိန်ကောင်မလေးက လူသေးသေးလေးနဲ့ ဖြစ်နေနိုင်သလို ..
အသက်ကြီးကြီး ကိုလူပျိုကြီးလည်း ကလေးတစ်သိုက်နဲ့ ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ် .. ဟဲဟဲ ..
တူတွေ တူမတွေလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မှာပေါ့လေ ။။
တကယ်ဆုံဖြစ်ကြတဲ့အခါ ဘာတွေများ ပြောဖြစ် ကြမလဲ ???
23 September 2009 at 3:44 PM
ပြောချင်နေတာတွေ နေဒေးဦးသွားတယ်.... x(
တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တိုင်းလဲ အထီးမကျန်ပါဘူး.. အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးပါ၊ မိန်းမက ပွစိပွစိလုပ်တာ မခံရဘူးပေါ့၊ အဟတ်..
23 September 2009 at 8:08 PM
Superlative Degree တွေ သိပ်များနေပါရော့လား သူငယ်ချင်းရယ်..
ဟေ့ Anonymous ရေ.. တကယ်ဆုံဖြစ်ကြတဲ့အခါ ဘာတွေပြောမလဲ သိပ်သိချင်နေလား...
“Hello! Darling... Long Time No See!! You'd been terribly better-looking as usual. It's heartily glad to see you again.!
:P Anonymous ရေ.တော်ပြီ ဒီလောက်ဆိုရင်.. တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း နှုတ်ဆက်ရအုံးမယ်လေဗျာ။ စကားမစပ် ခင်ဗျား အရမ်းစပ်စုတာပဲ..အဟီး။
ကြေငြာတာလား ။ ကြော်ငြာတာလား။
23 September 2009 at 8:38 PM
အော် ကိုမင်းအိမ်ဖြူကလဲ သွားတွေ့ရမှာများ ကြောက်နေသေးတယ် ဟာသတွေ ပြောပေါ့ လို့ ဘာဖြစ်လဲ တယောက်တည်း ရှိနေရင် စိတ်ရှုပ်ရတယ် အခုတော့ တယောက်တည်း လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဟုတ်ဘူး တကယ်လို့ ရှိနေရင် မိန်းမကို မိန်းမရေ ကိုယ် gathering သွားမလို့ ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းရဦးမယ် အခုတော့ တွေ့လား အင်းဆိုပြီး ခေါင်းညိမ့်လိုက်တယ်မလား ဘယ်သူမှ တိုင်ပင်စရာမလိုပဲနဲ့ ကဲ မကောင်းဘူးလား ဟွင်းးးးး အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးပါ ဟဟဟဟ ဘိုင် တာ့တာ လျှာရှည်သလိုဖြစ်ရင် ခွင့်လွှတ် ဟိဟိ
24 September 2009 at 12:45 AM
ငါလေ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်...
အော် ငါလေ တယောက်ထဲ အထီးကျန်
(အင်း၊းဒီမှာတော့ လမ်းဘေး ထိုင်စရာ ကဖေးလဲ မရှိပါလားနော်)
ညီမင်းအိမ်ရဲ့ စာကလေး ဖတ်ပြီး ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းလေး ဆိုသွားပါသည်။
24 September 2009 at 4:39 PM
ဟုတ်ပါ့။ ဖတ်ရင်းနဲ့ လွမ်းချင်သလိုလိုဖြစ်နေမိတယ်။ သို့သော် ဘာကို လွမ်းရမှန်းမသိ။
ဟုတ်တယ် .. တွေ့လည်းတွေ့ချင်တယ်
တွေ့လည်း မတွေ့ချင်ဘူး ..
ဝေးဝေးကနေ သတိရနေတာပဲကောင်းမလား ?
25 September 2009 at 9:50 PM
သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ ပြန်ဆုံတော့ ကောင်းတာပေါ့။ ပျော်စရာကြီး
27 September 2009 at 5:46 AM
blog မပိတ်သေးပါဘူးဗျ ....
အကြွေးတောင်းမှာစိုးလို့ပါ .... :P
cbox မှာအော်မရလို့ မန့်လိုက်ပြီဗျာ ....
27 September 2009 at 9:32 AM